ခါးနာတာ အရိုးအကြောကြောင့်လား ကျောက်ကပ်ကြောင့်လား အလွယ်တကူခွဲခြားနည်းခါးနာတာ အရိုးအကြောကြောင့်လား ကျောက်ကပ်ကြောင့်လား အလွယ်တကူခွဲခြားနည်း – Suehninsi
ခါးနာတယ်လို့ ယေဘုယျပြောတဲ့အခါ ဘယ်ကနာလဲဆိုတာ စတင်ဆန်းစစ်ဖို့ လိုလာပါတယ်။ လူနာတစ်ယောက် ခါးတစ်ဝိုက်မှာ လက်ကလေး တင်ထားသလို ပူပူကြီး နာနေပါသတဲ့။ ဓာတ်မှန် ရိုက်ကြည့်လိုက်တော့ ကျောက်ကပ်ထဲမှာ ကျောက်မှုန်လေးတွေ ရှိနေပါတယ်။ ရေများများ သောက်ခိုင်းလိုက်ပြီး နောက်လကျ ပြန်ရိုက်ဖို့ ချိန်းလိုက်ပါတယ်။ကိုယ်က ခါးထောက်လိုက်တဲ့အခါ လက်ကလေးတင်ထားတဲ့နေရာကို ကျောက်ကပ်နေရာ ခေါ်ပါတယ်။ကျောက်ကပ်က
နာရင် ဆီးပူ ဆီးကျဉ် ဆီးအောင့် တာတွေ ရှိမယ်၊ ရှိခဲ့ဖူးမယ်။နာတာက ပူပြီးနာမယ် အရမ်းနာပြီး ချက်ချင်း ပြန်သက်သာသွားတာမျိုးလည်း ရှိတတ်မယ်။ နာတာက ပေါင်တွင်းကြောတွေကနေ အမျိုးသားဆိုရင် အမျိုးသားအင်္ဂါထိပါ နာလာတတ်မယ်။ဆီးမကောင်းဘူး၊ အရောင် ရင့်ရင့် နောက်ကျိနေမယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ရေသောက် နည်းမယ်ဆိုရင် ဆီးကျောက်တည်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကျောက်ကပ်မှာ အရည်ကျိတ်လေးတွေ
တည်တာ၊ အကျိတ်ဖြစ်တာ၊ သွေးတိုးလို့ ကျောက်ကပ်ရောင်တာတွေဆိုရင် ခြေတွေ၊ မျက်နှာတွေပါ အမ်းပြီး ခါးနာလာတာမျိုးဆိုရင် ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေးကို စိတ်ပူရတာမို့ အမြန်ဆုံးပြသ စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ အရိုးက နာတာလား? အကြောညှပ်တာလား?စဉ်းစားရ ခက်သူတွေအတွက်ပါ၊ ဒါဆိုရင် နာတဲ့နေရာက နောက်ကျောနဲ့ ခါးအောက်ပိုင်း ဖြစ်တတ်ပါမယ်။မြန်မာတွေရဲ့ ခါးအခေါ်အဝေါ်က ဘယ်အပိုင်းကိုပြောမှန်း မသဲကွဲတတ်လို့ ဆရာဝန်က အသေအချာ မေးမြန်းရလေ့ ရှိပါတယ်။ ခါးအောက်ပိုင်း နာကျင်တာ၊
နောက်ကျောအောင့်တာတွေကအတော်များများမှာ အရိုးအကြောနဲ့လည်း ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ အရိုးအကြောကြောင့် နာတဲ့အခါ လေးလေးကြီး ခဲဆွဲထားသလို နာမယ်၊ အထိုင်အထ အလှည့်အကွေးမှာ ပိုနာမယ်။ နာတဲ့နေရာကို ဖိကြည့်ရင် အထိမခံဘဲ အောင့်မယ်၊ ကျဉ်မယ်။ ဓာတ်လိုက်သလို စူးခနဲ စူးခနဲ ဖြစ်မယ်။ အရိုးပွတာ (အဘိုးအဘွားတွေ၊ သွေးဆုံးပြီး အမျိုးသမီးတွေ) ခါးရိုးဆစ်ကျွံတာ ( အလေးအပင်မပြီး) ကြွက်သားတွေ ဒဏ်ဖြစ်တာ( အားကစားသမားတွေ) အရွတ်ရောင်တာ ကိုယ်ဝန်သည်တွေ လရင့်လာတဲ့အခါ အရွတ်တွေ
တင်းလာလို့ အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်ပြီးနောက်ကျောရိုးကိုပျံ့သွားတာ အရိုးတီဘီရောဂါဒါတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။(ချောင်းဆိုးမယ်၊ ကျော/ရင် အောင့်မယ်၊ အစား ပျက်မယ်၊ ပိန်မယ်၊ နောက်ကျောတွေ ခါးတွေ နာမယ်ဆိုရင် ရင်ဘတ်ဓာတ်မှန်ရိုက်ပြီး စစ်ဆေးဖို့ လိုလေ့ရှိပါတယ်။) ဒါ့အပြင်ေ သွးကြောမကြီး ဖောင်းတာ ၊အစာအိမ်လေနာ ၊မုန်ချိုအိတ် (ပန်ကရိယ) ရောင်တာတွေမှာလည်း နောက်ကျော အောင့်လာတတ်ပါတယ်။ အထက်ပါ ဖော်ပြချက်လေးတွေ ဖတ်ပြီးရင်တော့ကျောအောင့်တာလား? ခါးနာတာလား? ကျောက်ကပ်လား? ဆီးလား? နည်းနည်းစဉ်းစားဖို့ အိုင်ဒီယာ ရလောက်ပြီမို့ ဗဟုသုတ ပိုမိုပြည့်ဝလာဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
ခါးနာတယျလို့ ယဘေုယပြွောတဲ့အခါ ဘယျကနာလဲဆိုတာ စတငျဆနျးစဈဖို့ လိုလာပါတယျ။ လူနာတဈယောကျ ခါးတဈဝိုကျမှာ လကျကလေး တငျထားသလို ပူပူကွီး နာနပေါသတဲ့။ ဓာတျမှနျ ရိုကျကွညျ့လိုကျတော့ ကြောကျကပျထဲမှာ ကြောကျမှုနျလေးတှေ ရှိနပေါတယျ။ ရမြေားမြား သောကျခိုငျးလိုကျပွီး နောကျလကြ ပွနျရိုကျဖို့ ခြိနျးလိုကျပါတယျ။ကိုယျက ခါးထောကျလိုကျတဲ့အခါ လကျကလေးတငျထားတဲ့နရောကို ကြောကျကပျနရော ချေါပါတယျ။ကြောကျကပျက
နာရငျ ဆီးပူ ဆီးကဉျြ ဆီးအောငျ့ တာတှေ ရှိမယျ၊ ရှိခဲ့ဖူးမယျ။နာတာက ပူပွီးနာမယျ အရမျးနာပွီး ခကျြခငျြး ပွနျသကျသာသှားတာမြိုးလညျး ရှိတတျမယျ။ နာတာက ပေါငျတှငျးကွောတှကေနေ အမြိုးသားဆိုရငျ အမြိုးသားအင်ျဂါထိပါ နာလာတတျမယျ။ဆီးမကောငျးဘူး၊ အရောငျ ရငျ့ရငျ့ နောကျကြိနမေယျ။ ကိုယျကိုယျတိုငျလညျး ရသေောကျ နညျးမယျဆိုရငျ ဆီးကြောကျတညျတာ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ကြောကျကပျမှာ အရညျကြိတျလေးတှေ
တညျတာ၊ အကြိတျဖွဈတာ၊ သှေးတိုးလို့ ကြောကျကပျရောငျတာတှဆေိုရငျ ခွတှေေ၊ မကျြနှာတှပေါ အမျးပွီး ခါးနာလာတာမြိုးဆိုရငျ ကြောကျကပျကနျြးမာရေးကို စိတျပူရတာမို့ အမွနျဆုံးပွသ စဈဆေးသငျ့ပါတယျ။ အရိုးက နာတာလား? အကွောညှပျတာလား?စဉျးစားရ ခကျသူတှအေတှကျပါ၊ ဒါဆိုရငျ နာတဲ့နရောက နောကျကြောနဲ့ ခါးအောကျပိုငျး ဖွဈတတျပါမယျ။မွနျမာတှရေဲ့ ခါးအချေါအဝျေါက ဘယျအပိုငျးကိုပွောမှနျး မသဲကှဲတတျလို့ ဆရာဝနျက အသအေခြာ မေးမွနျးရလေ့ ရှိပါတယျ။ ခါးအောကျပိုငျး နာကငျြတာ၊
နောကျကြောအောငျ့တာတှကေအတျောမြားမြားမှာ အရိုးအကွောနဲ့လညျး ဆိုငျနိုငျပါတယျ။ အရိုးအကွောကွောငျ့ နာတဲ့အခါ လေးလေးကွီး ခဲဆှဲထားသလို နာမယျ၊ အထိုငျအထ အလှညျ့အကှေးမှာ ပိုနာမယျ။ နာတဲ့နရောကို ဖိကွညျ့ရငျ အထိမခံဘဲ အောငျ့မယျ၊ ကဉျြမယျ။ ဓာတျလိုကျသလို စူးခနဲ စူးခနဲ ဖွဈမယျ။ အရိုးပှတာ (အဘိုးအဘှားတှေ၊ သှေးဆုံးပွီး အမြိုးသမီးတှေ) ခါးရိုးဆဈကြှံတာ ( အလေးအပငျမပွီး) ကွှကျသားတှေ ဒဏျဖွဈတာ( အားကစားသမားတှေ) အရှတျရောငျတာ ကိုယျဝနျသညျတှေ လရငျ့လာတဲ့အခါ အရှတျတှေ
တငျးလာလို့ အဆုတျကငျဆာဖွဈပွီးနောကျကြောရိုးကိုပြံ့သှားတာ အရိုးတီဘီရောဂါဒါတှေ ဖွဈနိုငျပါတယျ။(ခြောငျးဆိုးမယျ၊ ကြော/ရငျ အောငျ့မယျ၊ အစား ပကျြမယျ၊ ပိနျမယျ၊ နောကျကြောတှေ ခါးတှေ နာမယျဆိုရငျ ရငျဘတျဓာတျမှနျရိုကျပွီး စဈဆေးဖို့ လိုလရှေိ့ပါတယျ။) ဒါ့အပွငျေ သှးကွောမကွီး ဖောငျးတာ ၊အစာအိမျလနော ၊မုနျခြိုအိတျ (ပနျကရိယ) ရောငျတာတှမှောလညျး နောကျကြော အောငျ့လာတတျပါတယျ။ အထကျပါ ဖျောပွခကျြလေးတှေ ဖတျပွီးရငျတော့ကြောအောငျ့တာလား? ခါးနာတာလား? ကြောကျကပျလား? ဆီးလား? နညျးနညျးစဉျးစားဖို့ အိုငျဒီယာ ရလောကျပွီမို့ ဗဟုသုတ ပိုမိုပွညျ့ဝလာဖို့ မြှျောလငျ့မိပါတယျ။
Source : ဂျီပီငှက် (ဆေး/မန်း) Dr.Myanmar